Kmail | मा Thunderbird ईमेलहरू आयात गर्नुहोस् लिनक्सबाट
Kmail मा Thunderbird ईमेलहरू आयात गर्नुहोस्
यो म प्रयोग पहिलो पटक छैन केडीईवास्तवमा यसका साथ मेरा पहिलो चरणहरू जीएनयू / लिनक्स उनीहरू थिए डेबियन एच con केडीई x.x, र अनुप्रयोगहरू मध्ये एक जुन मलाई यसको बारेमा सब भन्दा मनपर्दछ डेस्कटप वातावरण es केमेल तपाईंको मेल ग्राहक
कुरा यो हो, मैले सँधै प्रयोग गरेको छु थन्डरबर्ड खाताको साथ POP र मलाई मेरा सबै ईमेलहरू लिन आवश्यक पर्‍यो केमेल। प्रक्रिया वास्तवमै सजिलो छ र अन्तिम परिणाम शानदार छ। हामी यो कसरी गर्छौं?
१- हामी खोल्छौं केमेल र हाम्रो खाता सेट अप गर्नुहोस्।
२- यो चरण समाप्त भएपछि हामी गर्नेछौं फाईल »सन्देशहरू आयात गर्नुहोस्। त्यहाँ हामी विकल्प चयन: थन्डरबर्ड / मोजिला बाट ईमेलहरू र फोल्डर संरचना आयात गर्नुहोस्।
- हामी क्लिक गरेर अर्को चरणमा जान्छौं: अर्को र स्वत: विजार्डले फोल्डर पत्ता लगाउँदछ .थन्डरबर्ड हाम्रो / घर। हामी पूर्ण फोल्डर छनौट गर्न सक्दछौं, वा हामी फेला पार्न सक्दछौं जब सम्म हामी फोल्डर फेला पार्दैनौं मेल.
- विजार्डले सबै सन्देशहरू र तिनीहरूका सम्बन्धित फोल्डरहरूलाई नयाँ फोल्डरमा प्रतिलिपि गर्न सुरू गर्दछ। हामी यसको प्रतीक्षा गर्छौं र यो सकियो। हामी केवल संगठित र फोल्डरहरु मा सार्नु पर्छ केमेल.
यो विजार्डसँग अन्य धेरै रोचक विकल्पहरू पनि छन्, जस्तै:
फाईलहरू आयात गर्नुहोस् mbox.
बाट आयात गर्नुहोस् ओएस एक्स.
बाट आयात गर्नुहोस् ओपेरा.
बाट आयात गर्नुहोस् सिल्हीद.
बाट आयात गर्नुहोस् आउटलुक एक्सप्रेस.
लेखको पूर्ण मार्ग: लिनक्सबाट » aPLICACIONES » Kmail मा Thunderbird ईमेलहरू आयात गर्नुहोस्
अभिवादन राम्रो सल्लाह।
अब म म्याक ओएस स्टाइल फन्टमा कसरी त्यस्तो सहज प्रभाव पाउन सक्छु?
एर्टावरिजलाई जवाफ दिनुहोस्
मैले मेरो जीवनमा मक ओएस कहिल्यै खेलेको छैन तपाईले स्मूथ ईफेक्टको मतलब के हो भनेर जान्नको लागि। 😕 के तपाई मलाई भन्न सक्नुहुन्छ के भन्न सक्नुहुन्छ?
महीन फन्ट यदि तपाईंलाई थाहा छैन भने त्यो के हो र उबन्टुमा कम छ जुन पनि अवस्थित छ कि नरक तपाईंले यी पक्षहरूमा गर्नुहुन्छ।
हुनसक्छ, यदि तपाईं स्पेनिशमा बोल्नु भयो भने, elav मैले तपाईंलाई पहिलो पटक बुझ्ने थिएँ।
जे भए पनि ... elav, उनले "फन्ट स्मोइ .्ग" लाई जनाउँदछ, कि फन्टहरूमा एन्टिआलिजि।।
केमेललाई विन्डोज लाइभ मेलबाट सन्देश कसरी आयात गर्ने थाहा छैन?
सत्य मा, यो मेरो लागि ठूलो सहयोगी हुनेछ।
थाहा भएन। मसँग त्यस्तो प्रकारको खाता छैन, म के सोच्न सक्छु निम्न कार्यहरू गर्न:
- म लाइभ मेल डाटाको साथ IMAP प्रकार Kmail खाता सिर्जना गर्दछ (मलाई थाहा छैन यदि यो गर्न सम्भव छ भने)।
- म IMAP खाताबाट सन्देशहरू Kmail मा स्थानीय खातामा तान्दछु।
तर म तपाईंलाई भन्दैछु, मलाई थाहा छैन यदि यो गर्न सम्भव छ भने।
@elav लिनक्स वितरण के तपाईं प्रयोग गर्नुहुन्छ
ऊ अहिले अफिसमा छैन, ऊ भोलि फिर्ता आउनेछ। जे भए पनि म तपाईको लागि उत्तर दिन्छु 😀
LMDE (लिनक्स मिन्ट डेबियन संस्करण), वा डेबियन मात्र प्रयोग गर्नुहोस्।
प्रत्येक प्रयोगकर्ताको टिप्पणीमा तपाईले कुन डिस्ट्रो प्रयोग गर्नुहुन्छ तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ, साथै ब्राउजरले हाम्रो साइट पहुँच गर्न प्रयोग गर्यो, उदाहरणको लागि म आर्चलिन्क्स + फायरफक्स प्रयोग गर्दछु, तपाईले Windows7 + Chrome, आदि प्रयोग गर्नुहुन्छ। 😉
म थन्डरबर्डबाट केमेलमा लगभग २GB ईमेलमा सर्दैछु, त्यो सयौं हजार HHA हो।
मसँग M००MB SWAP छ किनकि मैले सोच्यो कि मैले यो कहिले प्रयोग गर्ने छैन, र मसँग २ जीबीको र्याम पनि छ। मैले नेपोमुक र अकोनादीलाई सक्रिय गर्नुपर्‍यो यो काम अझ बढी विश्वसनीयर गर्नको लागि, र मसँग लगभग 500०० मेगाबाइटमा स्वप्याप छ र मेरो र्याम १.2 जीबी खपत छ, चुप लाग्ने यो डरलाग्दो हो JAJAJAJAJAJA
elav यो लेख को लागी years बर्ष भन्दा बढी भयो। तर थन्डरबर्डबाट Kmail मा ईमेलहरू आयात गर्ने प्रक्रिया अझै यत्तिको सजिलो छ।
ट्यूटोरियल को लागी धन्यवाद।
म अन्तमा मेरो ईमेलहरू Kmail मा फिर्ता छ। त्यसैले मलाई लाग्छ मैले थन्डरबर्ड स्थापना रद्द गर्नुपर्नेछ।
Mykeura लाई जवाफ दिनुहोस्
कसरी स्टार्टअपमा पार्टसनहरू स्वत: माउन्ट गर्ने (सजिलो तरीका)
केडीई 3.5. still अझै अवस्थित छ ... केडीई 3.5.13..XNUMX.१XNUMX जारी गरियो